दशैंमा मधुमेह (सुगर)का रोगले कस्तो मासु खाने ? चिकित्सकको सल्लाह यस्तो छ (भिडियोसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more दशैंमा मधुमेह (सुगर)का रोगले कस्तो मासु खाने ? चिकित्सकको सल्लाह यस्तो छ (भिडियोसहित)
दशैंमा मधुमेह (सुगर)का रोगले कस्तो मासु खाने ? चिकित्सकको सल्लाह यस्तो छ (भिडियोसहित)
अशोज १८ गते, २०७६ - ११:४५
काठमाडौं । नेपालीहरुको महान् चाड बिजया दशमी घर आगनमा आइरहेको छ ।
दशैमा बिशेषत मासुको परिकार बढी खाइने गरिन्छ । सामान्यतया अरु बेलाभन्दा बढी मासु खाईने भएको कारण मानिसहरु बिरामी हुने र बिरामी भएहरुलाई पनि नयाँ समस्या निम्तिने हुनसक्छ । मासुका कारण बिभिन्न रोग बढ्न सक्छन् भने नलागेका रोगहरु पनि लाग्न सक्छन् ।
नेपाली समाजमा मधुमेह, थाईराईड, क्लोरोष्ट्रोल, प्रेसरका धेरै छन् । दशैंका बेला यस्ता बिरामीले मासु खाँदा ध्यान दिनुपर्छ नत्र यस्ता बिरामीमा झन् ठुलो समस्या देखिन्छ । दशैंको समयमा मधुमेह (सुगर)का रोगले कति मासु र कस्तो प्रकारको मासु खान उपयुक्त हुन्छ ? बरिष्ठ मधुमेह, थाईराईड तथा हर्मोन रोग बिशेषज्ञ डा. तिर्थलाला उपाध्यायले यस्तो सल्लाह दिएका छन् ।
उपाध्यायसँग फलानो क्रियशनले गरेको कुराकानी सान्दर्भिक लागेर यहाँ साभार गरेका छौं । हेर्नुहोस् डा. तिर्थलाल उपाध्यायको सुझाव :
अशोज १८ गते, २०७६ - ११:४५ मा प्रकाशित